]I-Professional Industrial Laser Chiller, Ekhiqiza Amanzi Emkhakheni |S&A Uhlobo lwenhlanzi ebukhali
Ukulawulwa kokushisa okuqondile kwezinhlelo ze-laser kanye nezicelo zezimboni kusukela ngo-2002
I-Fibre Laser Chiller
I-Ultrafast laser ne-UV laser chiller
Inqubo Yezimboni Chiller
Amanzi apholile chiller
I-CNC Spindle Chiller
Ukuxazulula inkinga kwe-chiller
S&A Uhlobo lwenhlanzi ebukhali
I-Industrial Laser Cooling kanye nokulawulwa kokushisa
Iminyaka engama-20 isipiliyoni ekupholiseni okusebenzayo
S&A UChiller wasungulwa ngonyaka ka-2002 eneminyaka engama-20 yesipiliyoni sokukhiqiza ama-chiller, futhi manje amukelwa njengephayona lobuchwepheshe elipholile nomlingani othembekile embonini ye-laser. S&A I-Chiller iletha lokho okuthembisayo - ukuhlinzeka ukusebenza okuphezulu, ama-chiller wamanzi athembekile athembekile anekhono elifanelekile anekhwalithi ephezulu.
Amanzi ethu aphindaphindayo alungele izinhlobo eziningi zezicelo zezimboni. Kanye nesicelo se-laser ikakhulukazi, sithuthukisa umugqa ophelele weAma-Laser Water chillers, asuka kwiyunithi yokuma yedwa eRack Mount Unit, kusuka kumandla aphansi kuya ochungechungeni lwamandla aphezulu, kusuka ku- ± 1 ℃ kuya ku- 0.1 ℃ inqubo yokuqina esetshenzisiwe.
Besilokhu sisiza amakhasimende emazweni angaphezu kwama-50 ukuxazulula izinkinga ezinkulu emishini yazo ngokuzibophezela kwethu njalo kwikhwalithi yomkhiqizo ezinzile, ukusungula okuqhubekayo nokuqonda kwezidingo zamakhasimende ......
S&A I-Chiller iletha lokho okuthembisayo - ukuhlinzeka ukusebenza okuphezulu, ama-chiller wamanzi athembekile athembekile anekhono elifanelekile anekhwalithi ephezulu.
I-Industrial Chiller System CW-6000 3KW amandla okupholisa ama-5 kuya ku-35 ° C izingalo lokulinganisa
I-Rack Mount chiller RMFL-1000 nge-1000W Handheld Laser Welding Machine
Amanzi selehlile Chiller CW-6210 Quiet Operation ± 0.5 ° C Precision Cooling
I-Industrial Chiller CW-5000 ye-Co2 Glass Laser Tube
Ephathekayo Water Chiller CWUP-20 Ultrafast Laser UV Laser ± 0.1 ℃ Ukuzinza RS485 Ukuxhumana
Iyunithi le-Inditor Refideration Unit CWFL-12000 nge-12kw fiber laser
Ukuba ngumholi wemishini yesiqandisi somhlaba yezimboni
Senza okungaphezu kokuthengisa umkhiqizo nje
Sinikeza ukwesekwa kwamakhasimende angama-24/7 futhi sinakekele zonke izidingo ezithile zamakhasimende ngokunikeza izeluleko eziwusizo zokulungiswa, umhlahlandlela wokusebenza kanye nezeluleko zokudubula ezinkathazo uma kungenziwa kungasebenzi kahle. Kanye namaklayenti we-OVERSEA, bangalindela insiza yendawo eRussia, UK, ePoland, eMexico, e-Australia, Singapore, India, Korea naseTaiwan.
-Nke S&A UChiller siletha kumakhasimende ethu agcwele kahle ezintweni ezihlala isikhathi eside ezingavikela umthombo wokuhamba komswakama nangothuli ngesikhathi sokuhamba ibanga elide ukuze ihlale ezindaweni ezingamakhasimende.
S&A UChiller wasungulwa ngonyaka ka-2002 eneminyaka engama-20 yesipiliyoni sokukhiqiza ama-chiller, futhi manje amukelwa njengephayona lobuchwepheshe elipholile nomlingani othembekile embonini ye-laser.
Iminyaka engama-20 yesipiliyoni
Kusukela ngo-2002, S&A I-Chiller inikezelwe kumayunithi e-chiller wezimboni futhi isebenza ngezimboni ezahlukahlukene, ikakhulukazi imboni ye-laser. Isipiliyoni sethu ekupholiseni kahle sisenza sikwazi ukuthi yini okudingayo nokuthi iyiphi inselelo yokupholisa obhekene nayo. Kusuka ku- ± 1 ℃ ku- ± 0.1 ℃ Ukuqina, ungahlala uthola i-chiller yamanzi efanelekile lapha ngezinqubo zakho.
Ukukhiqiza ama-chiller wamanzi we-laser amahle kakhulu, sethula umugqa wokukhiqiza osethuthukile esisekelweni sethu se-18000m2 sokukhiqiza bese usetha igatsha ukuze akhiqize insimbi yensimbi, i-compressor& I-condenser okuyizingxenye eziyinhloko ze-chiller yamanzi. Amandla okukhiqiza minyaka yonke manje afinyelela amayunithi angama-100,000 + ngonyaka.
Ikhwalithi iyinto ebaluleke kakhulu kithi futhi ihamba kuzo zonke izigaba zokukhiqiza, ukusuka ekuthengeni kwezinto zokusetshenziswa ekulethweni kwe-chiller. I-chiller yethu ngayinye ihlolwe ngelebhu ngaphansi kwesimo somthwalo owenziwe kabusha futhi ivumelana no-CE, Rohs futhi ifinyelele amazinga aneminyaka engu-2 yewaranti.
Sihlala sikhona kuwe
Iqembu lethu lobuchwepheshe lihlala lisenkonzweni yakho noma nini lapho udinga ulwazi noma usizo lochwepheshe mayelana ne-chiller yezimboni. Siphinde samisa amaphuzu enkonzo eRussia, e-UK, ePoland, eMexico, e-Australia, Singapore, India, Korea naseTaiwan ukuhlinzeka ngensizakalo esheshayo yamakhasimende e-Oversea.
Lokho okushiwo amakhasimende ethu
S&A I-Chiller yenza eminye imikhiqizo emihle, ukusetshenziswa okuhle kokupholisa ama-lasers ama-lasers noma izinhlelo ezihlukile njengokugcina ukugcinwa kwe-CPU kwamathempeli aphansi.
NgisebenziseS&A Ama-chiller amaphrojekthi amabili we-laser engraver futhi enza umsebenzi omuhle. Futhi imibuzo yami yaphendulwa ngokushesha okukhulu.
- yiklayenti lase-Australia
Vele ushiye i-imeyili yakho noma inombolo yocingo kwifomu lokuxhumana ukuze sikunikeze ngezinsizakalo eziningi!
I-TELE: + 86-20-89301885
Ifeksi: + 86-20-84309967
I-copyright © 2021 S&A Chiller - Wonke Amalungelo Agodliwe.